Vizicon(Iron+VitaminB Complex) – Online Myanmar Pharmacy
Pack Size:4x 15 's
Vizicon(Iron+VitaminB Complex) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
ကျန်းမာ၍တက်ကြွလန်းဆန်းနေစေဖို့ Vizicon သံဓာတ်အားဆေးကိုဆောင်ထားကြပါစို့။
Vizicon (ဗစ်ဇီကွန်) တွင် အလွန်ဘေးကင်းစိတ်ချရသော သံဓါတ်ပုံစံဖြစ်သည့် ကာဘွန်နိုင်းသံဓါတ် (carbonyl iron)ပါဝင်ဖွံ့စည်းထားခြင်းကြောင့်သံဓါတ်ဆေးလွန်ကဲခြင်းမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ။
ဗီတာမင်စီနှင့်ဗီတာမင်ဘီဒြပ်ပေါင်းစုများလည်းပါ၀င်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့် သံဓာတ်စုပ်ယူမှု အားကောင်းစေရန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါ၀င်အားဖြည့်ပေးပါသည်။၀မ်းချုပ်ခြင်းအလျဥ်းမရှိသည့်အတွက် စိတ်ချယုံကြည်စွာ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Vizicon (ဗစ်ဇီကွန်) ကိုသွေးအားနည်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့် သွေးအားနည်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုမှ ကင်းဝေးစေရန် အားဆေးအဖြစ် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်မိခင်များတွင်ပိုမိုလိုအပ်သော ဇင့်ဓာတ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖွံ့စည်းထား၍ သန္ဓေသားလေးအား ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်၊ကျန်းမာဝဖြိုးစွာ‌ မွေးဖွားလာစေရန်အထူးအထောက်အကူပြုခြင်း‌ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်မိခင်များတွင်လည်းစိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Vitamins & mineral needed for increased demand especially in pregnancy and lactation.
For the prevention and treatment of multiple nutritional deficiencies as iron, folic acid, B vitamin and zinc especially for the women of child-bearing age
Act asaprimarily regulators of metabolic processes and playarole in energy transformations, usually as co-enzymes in enzymatic systems hence improve immune functions & normalize bodily functions.